၂၀၁၇ ရှုံးကွှေးကိုပွနျမဆပျနိုငျတဲ့ ခယျြဆီးနဲ့ ၂၀၂၀ FAဖလားပိုငျရှငျ အာဆငျနယျ - SANTHITSA
လှနျခဲ့တဲ့ ၃နှဈ၂၀၁၇ FA ဖလားဖိုငျနယျမှာ ခယျြဆီးနဲ့ အာဆငျနယျ တှဆေုံ့ခဲ့စဉျက အာဆငျနယျအသငျး က ခယျြဆီး အသငျးကို ၂ဂိုး၁ဂိုးနဲ့ အနိုငျ ယူပွီး ဖလားကို ရယူ သှားခဲ့ပါတယျ။
မနညေ့က ကစားတဲ့ ၂၀၂၀ FAဖလား ဖိုငျနယျမှာလညျး ခယျြဆီးနဲ့ အာဆငျနယျတို့ ပွနျလညျဆုံတှခေဲ့ရာ အာဆငျနယျကပဲ ၂ဂိုး ၁ဂိုးနဲ့ ထပျမံ အနိုငျယူပွီး FAဖလား ကို ကိုငျမွှောကျ ပိုငျခှငျ့ရခဲ့ပွနျပါပွီ။
၂၀၁၇ တုနျးက အာဆငျနယျက ဗှဆေျောဦးဂိုးကို သှငျးယူခဲ့ပါတယျ။ ဒီနှဈမှာ ခယျြဆီးအသငျးက ဗှဆေျောဦးဂိုးကို ပှဲစပွီး ၅မိနဈအကွာမှာ ပျေါလဈစဈက သှငျးယူနိုငျခဲ့လို့ ခယျြဆီးရဲ့ FAဖလား အိပျမကျက ရှငျသနျ လာနိုငျ ဖှယျရာရှိတယျလို့တောငျ သုံးသပျခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ပထမပိုငျး ၂၅မိနဈမှာ ခယျြဆီးနောကျခံလူ ဆီးဇာ အကျဇျပီလီကူတာက အာဆငျနယျ တိုကျစဈမှူးအူဘနျယောကျကို ပယျနယျတီ ဧရိယာထဲမှာ လဲခခြဲ့လို့ ပယျနယျတီ ပေးခံလိုကျရခြိနျမှာတော့ ခယျြဆီးနညျးပွဖွဈသူ လမျးပတျအတှကျ စိုးရိမျစရာတှဖွေဈပွီး ပထမပိုငျးပွီးခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၇ တုနျးက အာဆငျနယျက ဗှဆေျောဦးသှငျး ခယျြဆီးက ခွပေဂိုး ပွနျသှငျး ၁ဂိုး-၁ဂိုဖွဈနခြေိနျမှာ အာဆငျနယျက ခကျြခွငျး ဆိုသလိုပဲ ခယျြဆီးကို အနိုငျဂိုးသှငျးပွီး ဖလားယူခဲ့တာပါ။
ဒီနှဈတော့ ခယျြဆီးက ဗှဆေျောဦးဂိုးသှငျး အာဆငျနယျက ခပြေဂိုး ပွနျသှငျးပွီးနောကျ ခယျြဆီးက ပှဲသိမျး အနိုငျဂိုး သှငျးကာ ဖလား ယူမယျလို့ တှေးထားပမေဲ့ ဒုတိယပိုငျး၆၇ မိနဈမှာ အူဘနျယောငျကပဲ အနိုငျဂိုးကို လှလှပပ သှငျးယူ သှားခဲ့ပါတယျ။
ခယျြဆီးကစားသမား မာတီယို ကိုဗာစဈက ၂ဝါ ၁နီနဲ့ ကှငျးထဲက ထှကျခှာသှားပွီး ၁၀ယောကျတညျးနဲ့ ကစားပမေဲ့ အာဆငျနယျရဲ့ ပိတျဆို့ ကစားမှုတှကေို လုံလုံလောကျလောကျ မထိုးဖောကျနိုငျခဲ့ပါဘူး။ အာဆယျနယျဂိုးသမားကလညျး ဒီပှဲမှာ လကျစှမျးတှေ ပွနတေော့ ခယျြဆီးတို့ ဒုတိယနရောနဲ့ ကနြေပျလိုကျရပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ အာဆငျနယျဖလားရသှားပမေဲ့ ခယျြဆီးရော အာဆငျနယျပါ လာမယျ့နှဈ UEFA လိဂျ ဝငျခှငျ့ရခဲ့လို့ တနျပါတယျ။ အာဆငျနယျကတော့ ဝငျဘာလကှေငျးမှာ သူတို့ရဲ့ ၁၄ ကွိမျမွောကျFA ဖလား ကိုငျမွှောကျပိုငျ ခှငျ့ရတဲ့ စံခြိနျသဈကို ရေးထိုးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
📺 FULL HIGHLIGHTS | Emirates FA CUP CHAMPIONS! 🏆
📅 Aug 2019: 736 teams are involved in the fight for the 2020 FA Cup. 📅 Aug 2020: After the longest season ever, just one team remained. Arsenal. 𝐓𝐇𝐄 Arsenal! Record finalists. Record winners. Record extenders! 📺 Fourteen reasons to ❤️ these highlights!👇
မောငျယဿ, REF:india times, Photo; you tube
၂၀၁၇ ရှုံးကြွေးကိုပြန်မဆပ်နိုင်တဲ့ ချယ်ဆီးနဲ့ ၂၀၂၀ FAဖလားပိုင်ရှင် အာဆင်နယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်၂၀၁၇ FA ဖလားဖိုင်နယ်မှာ ချယ်ဆီးနဲ့ အာဆင်နယ် တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်က အာဆင်နယ်အသင်း က ချယ်ဆီး အသင်းကို ၂ဂိုး၁ဂိုးနဲ့ အနိုင် ယူပြီး ဖလားကို ရယူ သွားခဲ့ပါတယ်။
မနေ့ညက ကစားတဲ့ ၂၀၂၀ FAဖလား ဖိုင်နယ်မှာလည်း ချယ်ဆီးနဲ့ အာဆင်နယ်တို့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ရာ အာဆင်နယ်ကပဲ ၂ဂိုး ၁ဂိုးနဲ့ ထပ်မံ အနိုင်ယူပြီး FAဖလား ကို ကိုင်မြှောက် ပိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြန်ပါပြီ။
၂၀၁၇ တုန်းက အာဆင်နယ်က ဗွေဆော်ဦးဂိုးကို သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ ချယ်ဆီးအသင်းက ဗွေဆော်ဦးဂိုးကို ပွဲစပြီး ၅မိနစ်အကြာမှာ ပေါ်လစ်စစ်က သွင်းယူနိုင်ခဲ့လို့ ချယ်ဆီးရဲ့ FAဖလား အိပ်မက်က ရှင်သန် လာနိုင် ဖွယ်ရာရှိတယ်လို့တောင် သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပထမပိုင်း ၂၅မိနစ်မှာ ချယ်ဆီးနောက်ခံလူ ဆီးဇာ အက်ဇ်ပီလီကူတာက အာဆင်နယ် တိုက်စစ်မှူးအူဘန်ယောက်ကို ပယ်နယ်တီ ဧရိယာထဲမှာ လဲချခဲ့လို့ ပယ်နယ်တီ ပေးခံလိုက်ရချိန်မှာတော့ ချယ်ဆီးနည်းပြဖြစ်သူ လမ်းပတ်အတွက် စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်ပြီး ပထမပိုင်းပြီးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၇ တုန်းက အာဆင်နယ်က ဗွေဆော်ဦးသွင်း ချယ်ဆီးက ခြေပဂိုး ပြန်သွင်း ၁ဂိုး-၁ဂိုဖြစ်နေချိန်မှာ အာဆင်နယ်က ချက်ခြင်း ဆိုသလိုပဲ ချယ်ဆီးကို အနိုင်ဂိုးသွင်းပြီး ဖလားယူခဲ့တာပါ။
ဒီနှစ်တော့ ချယ်ဆီးက ဗွေဆော်ဦးဂိုးသွင်း အာဆင်နယ်က ချေပဂိုး ပြန်သွင်းပြီးနောက် ချယ်ဆီးက ပွဲသိမ်း အနိုင်ဂိုး သွင်းကာ ဖလား ယူမယ်လို့ တွေးထားပေမဲ့ ဒုတိယပိုင်း၆၇ မိနစ်မှာ အူဘန်ယောင်ကပဲ အနိုင်ဂိုးကို လှလှပပ သွင်းယူ သွားခဲ့ပါတယ်။
ချယ်ဆီးကစားသမား မာတီယို ကိုဗာစစ်က ၂ဝါ ၁နီနဲ့ ကွင်းထဲက ထွက်ခွာသွားပြီး ၁၀ယောက်တည်းနဲ့ ကစားပေမဲ့ အာဆင်နယ်ရဲ့ ပိတ်ဆို့ ကစားမှုတွေကို လုံလုံလောက်လောက် မထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အာဆယ်နယ်ဂိုးသမားကလည်း ဒီပွဲမှာ လက်စွမ်းတွေ ပြနေတော့ ချယ်ဆီးတို့ ဒုတိယနေရာနဲ့ ကျေနပ်လိုက်ရပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အာဆင်နယ်ဖလားရသွားပေမဲ့ ချယ်ဆီးရော အာဆင်နယ်ပါ လာမယ့်နှစ် UEFA လိဂ် ဝင်ခွင့်ရခဲ့လို့ တန်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်ကတော့ ဝင်ဘာလေကွင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ၁၄ ကြိမ်မြောက်FA ဖလား ကိုင်မြှောက်ပိုင် ခွင့်ရတဲ့ စံချိန်သစ်ကို ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မောင်ယဿ, REF:india times, Photo; you tube